Fetin’ny Mozika : Misokatra ny fisoratana anarana ho an’ireo manan-talenta -
AccueilVaovao SamihafaFetin’ny Mozika : Misokatra ny fisoratana anarana ho an’ireo manan-talenta
Fetin’ny Mozika : Misokatra ny fisoratana anarana ho an’ireo manan-talenta
Miditra amin’ny andiany faha-37. Ankalazaina isaka ny 21 Jona ny fetin’ny mozika. Toa ny isan-taona, manokatra ny sehatra ho an’ireo manan-talenta ny Alliance Française etsy Andavamamba, ary misokatra ho an’ireo liana ny handray anjara amin’izany ny fisoratana anarana. Hisy araka izany ny fifantenana ireo manan-talenta sy ireo mpanakanto vao misondrotra. « Misokatra ho an’ny mpanakanto rehetra io na mpihira, mpamorona sy mpandrindra, olon-tokana na amin’ny tarika, tsy misy fetran-taona ary tsy mifidy karazana mozika », araka ny fampitam-baovan’ny Alliance française. « Ny fahasamihafan’ny mozika entina sy ny fomba fiseho an-tsehatra no hitsarana ireo mpandray anjara », hoy hatrany izy ireo.
Hifarana ny 24 febroary ny fisoratana anarana ho an’ireo maniry ny handray anjara maimaimpoana izany. Ny 3 marsa no hanaovana ny fifantenana etsy amin’ny AFT Andavamamba. Tsiahivina fa anisan’ireo toerana iray nanosika mpanakanto malagasy efa manana ny lazany ny Aft, raha tsy hitanisa afa-tsy ry Gangstabab, Samoela ary Dah’Mama.
Omaly antoandro, tokony ho tamin’ny 1ora no niditra an-tanety, tany amin’ny distrikan’i Toamasina ilay rivodoza mahery vaika AVA. Tamin’ny 5ora hariva teo, dia mbola tao amin’ny distrikan’i Toamasina no misy azy ary miha matanjaka ny ...Tohiny
Harry Laurent Rahajason : “Mpitady vola amin’ny asan-gazety ny MLE”
Fifidianana 2018 : Efa vonona ny CENI
Me Soloniaina Andriamaromanana : « MAMPANAHY NY FITANILAN’NY ZANDARIMARIA! »
Depiote Mapar sy Tim : Manao sorona ny mpianatry ny Oniversite